Vol. 12 I-OCTOBER, 1910. 1
NGaphambi kwexesha, nangemva kwayo yonke into ebonakalayo ebonakalayo ebonakalayo kukho umphunga. Ukusuka kwingqolowa yesanti ukuya emhlabeni, ukusuka kwi-lichen ukuya kwi-oki enkulu, ukusuka kwisilwanyana ukuya emntwini, wonke umzimba wenyama ubakho ngaphakathi kwimeko yayo ethile, ugcina ukwakheka kwawo ngaphakathi kwaye ekugqibeleni unyibilikiswe kwimeko yayo yomoya.
Eli gama lisuselwa kwelesiGrike, i-atmos, intsingiselo yokuthetha umphunga, kunye nespiraira, isikhewu. Sisigama esisetyenziselwa ukuchaza umoya ojikeleze umhlaba kwaye okwesibini into ejikelezileyo okanye impembelelo, intlalo okanye isimilo, okusingqongileyo elinye ikota. Ezi ntsingiselo zibandakanyiwe kwigama njengoko lisetyenziswe apha, kodwa ukongeza apha kunokubaluleka okunzulu kunye noluhlu olubanzi lwesicelo. Ukongeza ekungeniseni okulinganiselweyo ngokomzimba, umoya ojikeleze umhlaba kufuneka waziwe ukuba unefuthe elingaphezulu lomzimba kunye nokusebenzisa, kwaye kufanele ukuba kuqondwe ukuba kukwakho imeko yengqondo, imeko yengqondo kunye nomoya wokomoya.
Iintsholongwane zezinto zonke eziphilayo zibanjwa zixhonywe kwimozulu ngaphambi kokuba zibekho emanzini okanye emhlabeni. Ubomi obuyimfuneko kuzo zonke izinto ezibonakalayo buvela kwaye bujikeleze umoya. Isibhakabhaka sinika ubomi kwiimo zomhlaba kunye nomhlaba ngokwawo. Isibhakabhaka sinika ubomi iilwandle, amachibi, imilambo kunye nemilambo. Ukusuka kumoya wobomi kuvela ubomi obuxhasa amahlathi, izityalo kunye nezilwanyana, kwaye abantu bafumana ubomi babo kwindalo. Isibhakabhaka sidlulisela kwaye sidlulise ukukhanya kunye nesandi, ubushushu kunye nokubanda, kunye neziqhumiso zomhlaba. Ngaphakathi kuvuthuza imimoya, kuqubuke imvula, kwenziwe amafu, kudalwe imibane, kukho uqhwithela, kubonakale imibala, ngaphakathi kuyo yonke indalo yenzeka. Ngaphakathi kwomoya kukho ubomi nokufa.
Yonke into enayo ingaphakathi komoya wayo. Kwimozulu yayo yento nganye eyenzekayo. Nqamla okanye ucime into kwindawo yayo kwaye nobomi bayo buza kuyishiya, imo yayo iya kungqubana, amasuntswana ayo azahlulele kwaye ubukho bayo buyeke. Ukuba umoya ojikeleze umhlaba ubunokuvalwa emhlabeni, imithi nezityalo ziya kufa kwaye zingakwazi ukuvelisa ukutya, amanzi ebengayi kufaneleka ukusela, izilwanyana nabantu bebengakwazi ukuphefumla kwaye bazakufa.
Njengoko kukho umoya womhlaba, apho umhlaba uphefumlela khona kwaye uphile, ugcina ubume bawo kwaye ubukho bawo, kunjalo ke nakwimeko yezulu, ekuthi xa umntwana azalwe, aze umntu akhule alondoloze ubuntu bakhe . Umoya wakhe uyinto yokuqala umntu ayithathayo kwaye yinto yokugqibela ethi, njengomntu wokwenyama, anikezele. Imozulu yendoda ayisiyonto ingapheliyo kwaye ayisiqinisekanga ngobuninzi bayo, inengcaciso ecacileyo kunye neempawu. Inokuba yinto ebonakalayo kwiimvakalelo kwaye iyaziwa engqondweni. Imozulu yomntu ayifanelanga ukuba ngathi yinkungu ephakathi yenkungu okanye umphunga. Iimozulu zezidalwa ezenza umntu, zinemida yazo ethile kwaye zihlobene ngokuzibophelela ngokuqinisekileyo, uyilo oluthile nangokomthetho.
Indoda yokwenyama ekwimozulu yayo ifana ne-fetus egutyungelwe emgqomeni kunye ne-chorion kwinkqubo yokukhula ngaphakathi komkhathi wayo omkhulu, esibelekweni. Malunga nekota ezintathu zesondlo okokugcinwa komzimba wakhe sithathwa kukuphefumla kwakhe. Umphefumlo wakhe awungomanani wegesi engena kwimiphunga yakhe. Umphefumlo ngumjelo oqinisekileyo othi umzimba ukondle kuwo ngokwasemzimbeni nangokwasemphefumlweni, njengoko umntwana esondliwa ngokuphuma kumjelo wegazi ukuya esibelekweni nakwindawo ebambeka kuyo.
Ubume bokwenyama bomntu buqulathwe ngamasuntswana angabonakaliyo kwaye angabonakaliyo athatyathwa kuwo kwaye alahlwe ngaphandle emzimbeni womzimba ngokuphefumla kunye nangeepores zolusu. Amasuntswana omzimba athathwe ngomphefumlo angena ngokudibeneyo kunye nawomzimba kwaye agcine ubume bawo. La masuntswana omzimba agcinwa ukujikelezwa ngumphefumlo. Bajikeleze umntu wenyama kwaye ke bayenza imeko yakhe yasemzimbeni. Ubume bokwenyama buchatshazelwa yiphunga kunye nesiqhumiso kwaye ivelise ivumba, elilelokwimo kunye nomgangatho womzimba wenyama
Ukuba umntu unokubona imeko yenyama yomntu iya kubonakala ngathi ngamasuntswana angenakubalwa kwigumbi elenziwe wabonwa lilanga lokukhanya kwelanga. Ezi zinokubonwa zijikeleza okanye zijikeleza emzimbeni, zonke zigcinwa ngokuphefumla kwakhe. Ziya kubonwa ukuba ziyaphumela ngaphandle, zijikeleze kwaye zibuyela emzimbeni wakhe, zilandela naphi na apho zichaphazela khona kwaye zichaphazela amasuntswana ezinye izinto zokomoya ezenzeka ekunxibelelaneni nazo, ngokwamandla ayo kunye nokuba sesichengeni kwimo yomzimba enxibelelana nazo. . Kukudibana okanye ukudityaniswa komoya wasemzimbeni ukuba izifo ezosulelayo zisasazekile kwaye usulelo lomzimba luye lwangeniswa. Kodwa umzimba womntu unokwenziwa ukuba ungakhuselekanga ekwabelweni ngumzimba ngokuzigcina ucocekile ngaphakathi nangaphandle, ngokwala ukungoyiki, kunye nokuzithemba kwempilo kunye namandla okumelana nayo.
Imeko yengqondo yomntu ihamba kwaye ijikeleze imozulu yakhe yenyama. Imeko ye-psychic yomelele kwaye inamandla ngakumbi kwimpembelelo nakwimpembelelo kunokwenyama. Indoda yengqondo ayinakwenziwa, kodwa imelwe yifomathi yomzimba wendoda eyomzimba. Ngomzimba wefomathi ye-astral njengeziko, umoya ojikeleze umhlaba ubujikeleze kunye nomzimba womgama olingana namandla awo. Ukuba ibinokubonwa inokubonakala njengomphunga okanye emanzini. Umoya obonakalayo unokubonakala ngaphakathi kuwo njengamasuntswana okanye indawo yokuntywila emanzini. Imozulu yengqondo yendoda inokufaniswa nolwandlekazi olujikelezayo, kunye nemijelo yalo eshushu neyabandayo, amaza alo kunye nokuhamba okungagudlisanga, imimoya evuthuzayo kunye namadonga ayo, ukuqhula kwayo kunye nokwenza, kunye nokuphakama nokuwa kweendledlana zayo. Imeko yengqondo yendoda ihlala ibetha ngokuchasene nomzimba wenyama kunye nefomathi yayo ye-astral, njengoko ulwandle lubetha elunxwemeni. Imozulu yengqondo iyagqitha kwaye ijikeleze umzimba wenyama kunye nomzimba wayo weemvakalelo, umzimba wefomu le-astral. Iimvakalelo, iminqweno kunye neenkanuko zisebenza kwimo yengqondo njengekunyuka kunye nokuwa kweethayile, okanye njengokutsiba kunye nokutshixiza kunye nokuchitha amanzi ngokuchasene nesanti engenanto, okanye njengethambo okanye iforholo lokuzama ukuzoba yonke into ephantsi kwempembelelo yayo. , ngaphakathi. Njengolwandle, imeko yengqondo ayiphumli kwaye ayoneliseki. Imeko yengqondo isebenza ngaphandle kwayo kwaye ichaphazela abanye. Njengoko iqhubeka in okanye idlula okanye inyikima umzimba we-astral form, zonke iintlobo zeemvakalelo okanye iimvakalelo ziveliswa kwaye ezi zinto zenziwa ngokukodwa kwimo yokuchukumisa, ukubamba ngaphakathi. Oku kunyanzela ukuya ngaphandle kwintshukumo kwaye ivakale njengamaza anyukayo omnye komnye kwinto yayo, okanye ibangela ukulangazelela kwento ethile kwaye ivelise imvakalelo njengokwesithembiso esomeleleyo.
Ukujikeleza ngomzimba wefomathi ye-astral kunye nokujikeleza okungokwasemzimbeni, umoya wengqondo ophakathi njengenye yeempawu zawo ezinempembelelo efihlakeleyo ekubhekiswa kuyo njengomazibuthe obuntu. Inamandla ngohlobo lwayo kwaye inokuba nomtsalane onamandla kwabanye. Imeko yengqondo yomntu ichaphazela abanye adibana nabo, ngokulinganayo namandla ayo okanye nobugagu bokwenyani kunye nangokuchaphazeleka kwamanye amadoda, ngokweendawo zabo zokomoya. Le meko yemimoya yomntu yomnye iyavuselela kwaye iphazamise imeko yokomoya yomnye umntu okanye yabaninzi kwaye emva koko enze izinto emzimbeni okanye kwimizimba; kwaye amalungu omzimba ayavuseleleka ngokobunjani bokunqwenela okanye imvakalelo okanye inkanuko eyongamileyo. Oku kungenziwa kukubakho nje kolunye, ngaphandle kokusebenzisa amagama okanye isenzo salo naluphi na uhlobo. Ukuze abanye bazive benyanzelekile ukuba benze okanye bathethe izinto okanye banike iimvakalelo ezithile, ebebengenakuyenza xa bengachukunyiswanga yimeko yengqondo okanye yongqinisiso lobuqu yalowo ubashukumisayo okanye abatsala. Umntu obona ukuba imeko yengqondo yakhe inempembelelo komnye ngokuchasene noko akwaziyo ukuba kokona kulungileyo, okanye ukuba uziva ngathi unefuthe elingafanelekanga, unokujonga isenzo okanye atshintshe impembelelo ngokungavumeli imvakalelo okanye umnqweno azivileyo, nangokutshintsha umbono wakhe kwisifundo sohlobo oluhlukileyo nokubamba ingcinga yakhe ngokungagungqiyo kweso sifundo. Yonke imvakalelo kunye nokuziva unalo naluphi na uhlobo kuveliswa ngakwimo yengqondo yakho kunye nemozulu yengqondo yabanye. Imeko yengqondo yabantu abathile inefuthe lokuvuselela, umdla, kunye umdla abo badibana nabo. Oku kunokuba yinto ethandekayo. Abanye banomphumo ochaseneyo wokunikezela okanye ukubulala abo badibana nabo, okanye ukubangela ukuba baphulukane nomdla kwimicimbi.
Imeko yengqondo yinto ephakathi apho ingqondo isebenza ngokwasemzimbeni ngokwasemzimbeni wayo, kwaye lixesha eliphakathi apho yonke imizwa kunye nezimvo zivakaliswa khona kwingqondo. Ngaphandle kwemeko yengqondo, ingqondo yomntu ekwimeko yakhe yangoku yophuhliso ayinakuba nakho ukwazi okanye ukunxibelelana nokwenza kunye nomzimba wakhe wenyama okanye okwenyama.
Kwimeko yangoku yokuphuhliswa komntu umntu akanakuchazwa kwaye uchazwe kakuhle emzimbeni wengqondo ngexesha lobomi bakhe bomzimba. Kodwa kukho imeko eqinisekileyo yengqondo ejikeleze kwaye isebenza ngokujikeleza kwimozulu yengqondo, kwaye ukusuka apho emzimbeni womzimba ngokuphefumla nangamaziko emithambo yomzimba. Imeko yengqondo ifana namabala ombane okanye amandla ombane, njengahluliweyo kumgangatho wemagnethi yokomoya. Inxulumene nemoya yomoya njengoko umbane umazibuthe. Imeko yengqondo iyaheha imeko yengqondo kunye nangemeko yentshukumo yengqondo ngokwengqondo nangomoya wemoya yezengqondo yonke imilo yezengqondo kunye neyomzimba kunye nokubonakaliswa kuyenziwa okanye kusenziwa.
Ingqondo eshukumayo kwimeko yayo yengqondo ayinangqondo, kwaye ayixhomekeki kuluphi na uhlobo. Kuphela kuxa kusebenza ngokusebenza nangokunxibelelana nomoya we-psychic kunye nomzimba wenyama apho uchaphazeleka kwaye ube namava ovakalelo. Ingqondo ekwimo yayo yengqondo isebenza ngokucinga. Ingqondo esebenza kwimeko yayo yengqondo kwaye xa ubandakanyeka kwiingcamango zokucinga ngokuqinisekileyo ayinayo imvakalelo.
Kuphela kuxa ingcinga ingena kwimmo yengqondo kwaye inxibelelana neengqondo apho amava engqondo evakalayo.
Imeko yengqondo iyimfuneko kubomi bomntu njengoko umoya uyimfuneko emhlabeni kunye namanzi kunye nobomi bezityalo nezilwanyana. Ngaphandle kwemeko yengqondo umntu unokuphila, kodwa uya kuba sisilwanyana kuphela, i-maniac, okanye i-idiot. Kungenxa yemeko yengqondo yokuba umntu wenyama abonakale ekho kwaye ungaphezulu kwesilwanyana. Imozulu yengqondo iyodwa ayinasazela okanye uloyiko lokuziphatha. Icacisiwe kwaye ilawulwa ngumnqweno, kwaye ayiphazanyiswa naziphi na izimvo zokuziphatha okanye ezilungileyo nezingalunganga. Xa imeko yengqondo inxibelelana kwaye isebenze ngokunxulumene nemozulu yengqondo, umoya wokuziphatha uvuswa; umbono wokulungileyo nokungalunganga uthathelwa ingqalelo, kwaye, xa isenzo esiqwalaselweyo sichasene nemvuselelo yokuziphatha evuselelweyo, emva koko isazela siyahleba, No. Imozulu yomoya ovuthuzayo, kunye nesenzo sokuziphatha okubi akuvumelekanga. Kodwa xa umnqweno unamandla kunokucinga okulungileyo, imeko yengqondo iyavalela ixesha imeko yengqondo kunye nomnqweno ufakwa ekusebenzeni njengoko iimeko neemeko ziya kuvumela.
Imeko yengqondo yendoda ichaphazela abanye ngendlela eyahlukileyo kwimo yakhe yengqondo. Ubume bakhe bobuchaphaza buchaphazela iimvakalelo zabanye, kwaye umnqweno yinto esebenzayo kunye nemvakalelo sisiphumo; lo gama imeko yengqondo ichaphazela abanye kwiinkqubo zengqondo. Iingcinga zizinto eziqhutywa ziinkqubo zengqondo. Ukusebenza kwendawo yengqondo yinto evusa inkanuko. Ezo meko zengqondo ziqiqeke, kwaye ziphumela kwingcinga. Intshukumo yengqondo kwingqondo yengqondo yimilo, kwaye xa i-psychic ilawulwa yengqondo sisiphumo sokuziphatha.
Ngokuzimeleyo komzimba wenyama kunye neatmosfera yayo kunye nomoya oqaqambileyo wendoda okanye wabanye, umoya wakhe wengqondo uvusa, uvuselele kwaye ukhuthaze abanye ukuba bacinge kwaye ubacebise kubo izifundo zokucinga, okanye ngenye indlela inesiphumo sokubeka ukungcungcutheka, ukucinezela , ukubaneka nokuhlutha imisebenzi yabo yengqondo. Oku akusoloko kusenziwa ngenjongo. Enye echaphazela abanye isenokungayazi ngokupheleleyo imiphumo; ezi ziphumo ziveliswa kunye okanye ngaphandle kwenjongo yakhe ngokwamandla eengcinga zakhe kunye nokuba sesichengeni kwemeko yengqondo yabanye kubo. Ezo meko zilinganayo, okanye ziphantse zilingane, zimozulu yengqondo ezinokwenzeka ziyaxhasana kwaye zichasane xa izimvo zabo zahlukile. Inkcaso enjalo inokuphakamisa kwaye ikhuphe okanye iphuhlise amandla okucinga, kwaye inokuthi iqinise umoya wengqondo nokuba bobabini okanye bobabini, ukuba ayivelisi isiphumo esichaseneyo sokufumana ngaphezulu kunye nokuzithoba.
Imeko yengqondo ngumlamli phakathi kwesilwanyana senyama enesimo sayo sengqondo, kunye nokufana okanye umntu wokomoya. Ngobume bendawo yengqondo kunye neengcinga ezisebenza ngayo, umnqweno onamandla kwimo yengqondo ephazamisayo yengqondo unokulawulwa kwaye ulawulwe kwaye umntu wenyama wenze isixhobo esifanelekileyo apho iminqweno isebenza ngokuqonda, ingqondo iqeqeshe kwaye isazi ngokupheleleyo ngokwayo kunye nomsebenzi wayo kwihlabathi kunye nokuqhubeka kokuqonda ukungafi.
Ngokungafaniyo nabaphilayo ngokwasemzimbeni nangokwasemzimbeni kwii-psychic zabo nasemoyeni wemoya yabo, umntu wokomoya okwimo yakhe yokomoya unesigxina. Kungenxa yolu bunyani kunye nokusisigxina kwimeko yokomoya yomntu wokomoya ukuba umoya wengqondo uvele, umoya wengqondo obekiweyo kunye nokubizwa komzimba ukubakho, nganye ngaphakathi nangomnye, kwanokuba ukubakho ngokwasemzimbeni nangokwengqondo nangokwengqondo Iimozulu zenziwe emva kokuba zahlukile komoya wokomoya.
Ukuze ingqondo iwuqwalasele njengomxholo wengcinga, umoya wokomoya womntu unokufaniswa nendawo engenaluthotho yokukhanya engenamithunzi nomntu wokomoya kuloo nto ayaziyo nokhanyayo. Ngendlela yobudlelwane nangokomlinganiso, umntu unokujonga imeko yengqondo njengakwinxalenye engezantsi yokomoya, yengqondo ngaphakathi kwengqondo, ngokwasemzimbeni ngaphakathi kwendawo yengqondo, kunye nendoda yomzimba njengesihendo sayo yonke.
Nokuba imeko yokomoya okanye yokomoya ayinakubonwa ngama-clairvoyants. Imeko yokomoya inokubakho, kodwa ihlala ingabanjwa ziingqondo, okanye iphiliswe ngumntu, kuba ingqondo ihlala ixhalabisa kakhulu ngezinto zezinto. Naxa okomoya sithathwa njengento ekuthethwa ngayo ngokwasemphefumlweni, kodwa umntu wokomoya kunye nomoya wokomoya ayisiyo imvakalelo okanye imisebenzi yengqondo. Ubume bokomoya abuvamisi ukuba kubonwe ngumntu ngenxa yokuba umoya wengqondo uphithizela kwaye ungazinzisi kangangokuba amadoda awawaqondi amandla okomoya okanye abubonakalise ubukho bawo. Umntu unokuyiqonda imeko yakhe yokomoya ngokuba nemvakalelo okanye ngesazela ukuba yena, "Ndinguye,", aqhubeke engazi nokuba uswele ntoni na. Ukuqhubeka u "Ndi" kuya kuziva kunokwenyani kunokufa. Ngenxa yemeko yengqondo, ingqondo ayiqondi kwaye ichaze gwenxa imvakalelo yokuqhubeka "Ndi", kwaye inika ixabiso kubuntu (Oko kukuthi, ingcinga yam kwaye ayisiyiyo i-faculty yam), enomnqweno onamandla iza kuqhubeka. Xa ingqondo ikhangela imeko yokomoya, umoya wokomoya ubanjwa njengoxolo namandla athule kunye nokungangeneki. Umoya wokomoya unika ingqondo ukholo, olunzulu kwaye luhlala ngaphezu kwayo nayiphi na into ebonakalayo enokuthi iveliswe ngobungqina beemvakalelo okanye ngengcinga. Ngenxa yobukho bomoya wokomoya, ingqondo yomzimba inokholo kunye nesiqinisekiso sokungafi.
Inxalenye yomzimba engafundiswanga ayide icinge into yomntu wokomoya xa umoya wokomoya usenza ubukho bawo, kuba imeko yokomoya ayifumaneki kwaye yahlukile kwimeko yengqondo ukuba uvelisa uloyiko, ukuzola, amandla kunye nobukho , engaqhelekanga kakhulu ukuba icatshangelwe yingqondo yomntu ngaphandle koloyiko okanye uloyiko. Ukuze xa umoya wokomoya uzenze waziwe ngobukho bawo ingqondo yoyika kakhulu ukuba kungathi cwaka nokuba uyayazi.
Bambalwa abantu abanike ingcinga kumxholo wemozulu njengoko zisetyenziswa endodeni nganye. Mhlawumbi umahluko kunye nobudlelwane obukhoyo phakathi komzimba wengqondo, owengqondo, owengqondo kunye nowokomoya kunye nemozulu yawo ethile ayiqwalaswanga. Nangona kunjalo, ukuba ingqondo ijongene nomxholo wezulu kwaye iphanda ngobunono, amasimi amatsha aya kuvulwa kwaye ukukhanya okutsha kuya kuphoswa kwindlela apho iimpembelelo ziziswa yindoda ethwele abanye. Umfundi uya kufumanisa ukuba kutheni yena nabanye benento enye echasene nezinto ezingaqhelekanga, kunye nendlela nganye nganye eyifumana ngayo ulawulo lwezinto ezenziwayo kwaye inike indawo elandelayo. Ngaphandle kokuyiqonda ngokucacileyo imeko yezulu yomntu, umntu akazukuyiqonda kakuhle into engaphakathi kwendalo kunye nemithetho engaphantsi yolawulo lwezinto ezibonakalayo, kwaye akasayi kuba nakho ukufumana, ngobukrelekrele, engena kwaye enze naliphi na elinye ilizwe ingqongwe. Kuncinci okwaziwayo ngesihloko semozulu, kodwa akukho mntu ungaqondanga ziimpembelelo zomoya oveliswa ngumntu kuye nakwabanye.
Ukuba umntu uhleli yedwa ze kubhengezwe igama lomnye, igama liya kuthi libe nefuthe laso. Xa enye ingena, isiphumo esahlukileyo siveliswa kuba imeko yokomoya yeendwendwe ichaphazela imeko yokomzimba yalowo imamkelayo. Nganye ichaphazeleka kwimeko yendawo yomzimba yomnye, enokuba imnandi okanye ingangqinelani, ngokobunye okanye ubuqhetseba bemeko yamasuntswana ngokomzimba eyakhiwe kuwo imeko nganye yendawo yokuhlala. Umzimba wokomzimba ngamnye uya kutsala okanye urhoxise omnye; okanye basenokuba kufutshane kakhulu kumgangatho kangangokuba abayi kuphinda baphinde okanye bahebe kodwa babe “sekhaya” kwinkampani nganye.
Ezinye izinto, nangona kunjalo, zizinyanzela ngokwazo. Zizimo zengqondo nganye nganye. Imozulu yomoya yezi zinto zimbini inokuvumelana okanye ichasane. Esi sivumelwano okanye inkcaso iya komelezwa okanye incitshiswe yindlela ezisebenza ngayo iidemon. Ngaphandle komnqweno osebenza okwethutyana kwimeko nganye yokomoya kunye nangaphandle kwenjongo yotyelelo, kukho indalo engaphantsi komgangatho kunye nobume bemeko yokomoya enye nenye, eya kuthi ichaphazele imeko ephantsi kunye nemeko yengqondo yomnye . Ke kuyakuvuselelwa inkcaso, umsindo, umona, ubukrakra, intiyo, umona okanye nayiphi na into ebambekayo, okanye intlebendwane, uvelwano, imvakalelo yobubele, ububele okanye umdla. Ezi ziphumo ziveliswa ngumsebenzi womgaqo-siseko womnqweno kwibhetri kazibuthe, umzimba wefomu le-astral. Umzimba we-astral form uvelisa amandla ombane akhutshwa kuwo onke amalungu emzimbeni wenyama, kodwa ngakumbi ezandleni nasefreyini. Oku kusebenza njengamadangatye athambileyo okanye awomeleleyo obangela imeko yengqondo yelinye ukuba ihambe ngamaza athambileyo okanye awomeleleyo angena ahlasele okanye adibanise nemozulu yokomoya yelinye. Ukuba oku kuyavumelana nomnye umoya wakhe wamkelayo, uvelise kwaye uphendule kwifuthe kunye nokwenza ngokungqinelana nomnye; ukuba indalo ichasene nomoya wemozulu yohlobo lwayo kunye nomgangatho wayo, iiremosfera ziya kuthi zixabane kwaye zisebenze ngendlela efanayo naleyo yemijikelezo yomoya emacala mabini ihlangeneyo; Isiphango sisiphumo.
Ngephanyazo, okanye emva kwentlanganiso yeemeko zokomoya kunye nezeemeko zokomoya zemo yezulu nganye ithi, kwaye ngokwamandla ayo ahambelana namandla enye yendawo yezulu yengqondo iya kuphembelela kwaye ilawule imeko yokomoya kunye neyemimoya kwaye ichaphazele imeko yengqondo enye. Ukuba imozulu ebonakalayo neyasemoyeni ziyavumelana omnye komnye, kwaye ukuba imeko yengqondo iyahambelana kunye nabo, indalo elungileyo iyahlula kwaye imvisiswano isekwe phakathi kwezi zimbini. Kodwa ukuxabana, ukuziva ungalunganga okanye imfazwe evulekileyo iya kubakho ngokungangqinelani phakathi komzimba ngokwasemzimbeni nangokomqondo nangokwengqondo yala madoda mabini.
Ukuba ingqondo yomnye iqeqeshekile kwaye inemeko yengqondo ephantsi kolawulo, iya kuba nakho ukuphembelela ingqondo nokulawula imeko yokomoya yomnye. Kodwa ukuba akukho zingqondo zilawula eyakhe imozulu yokomoya, ezona moya zimbini zinamandla omoya ziya kuthi zibe nefuthe kwaye ziwulawule umoya wengqondo kunye nowokuphakathi kwengqondo.
Ukuba ukuma kweshishini kunye nenqanaba lentlalontle kunye nezinto zezona zinto zibaluleke kakhulu, ziya kuba nefuthe komnye umntu. Ukuba unomdla, uvelwano kwaye uqhutywa ngokulula ziimvakalelo kunye neemvakalelo, uya kuchaphazeleka kakhulu yimeko yokomoya yomntu omtsha. Ukuba ucinga into ngaphambi kokuthatha inxaxheba, ukuba unikwe uphando nohlalutyo, ukuba umlinganisa umntu ngamandla akhe engqondo hayi ngezihlabo anokuthi azivelise, okanye ngeempawu zomzimba, uya kuba sesichengeni soku. kuphenjelelwa yimeko yengqondo yomnye. Ngokwendlela yesimo sobunye imeko yengqondo yomntu iya kudibana kwaye ivumelane nenye kwaye ngokwamandla ayo iya kuphenjelelwa okanye ikhokelwe yenye. Kodwa ukuba imeko yengqondo enye ayifanelani nokunye, ke kuya kubakho inkcaso nembambano, de ibe nye kuzo zombini ziya kuvumelana okanye zinike omnye kwaye zijolise kwelinye, ngaphandle kokuba iimeko ezimbini zengqondo ezahlukileyo kwi Uhlobo kufuneka luphantse lube ngokulinganayo kumgangatho, okanye ukuba iindawo zokomoya ezomeleleyo zanele ukuthintela isivumelwano kwaye zibangele ukuba bahlale bephikisana kwaye bechasa omnye komnye.
Ingqondo eqhelekileyo ayikwazi ukwenza ngqo ngokusebenzisa imeko yayo yengqondo kwimeko yengqondo yomnye, ngoko isebenza ngokungafaniyo okanye inconywa yimeko yokomoya ukuba isebenze ngayo kwimeko yengqondo yomnye. Ingqondo ifikelela kwingqondo kwaye ihambise umzimba wento yobume, kunye nomnqweno. Ngezenzo zengqondo ngomnqweno kunye nefom, ulwimi lokukhanya olungabonakaliyo lukhutshwa phakathi kwamashiya kunye nebunzi. Ke ukwenza, ingqondo enye ibulisa, imiceli mngeni okanye imibuliso, ingqondo yomnye ngemeko yakhe yengqondo; ingqondo yakhe isebenza ngendlela efanayo kwaye iseka isikhululo ebunzini lakhe; ezi zikhululo zibini ke zamisela ukukhanya kwaye zifumana imiyalezo ngakwimo nganye yengqondo. Amagama anokusetyenziselwa ukunxibelelana okanye ukuzisa izikhululo kwezokudlwengula, kodwa ngokwamandla ayo imeko nganye yengqondo inefuthe elinye kwelinye ngokuzimeleyo kwamagama.
Kwimozulu yomzimba echaphazela imeko yenyani yomnye, umzimba wenyama kufuneka ubusondele. Ukuba umoya wengqondo womnye uphembelela enye, kufanelekile ukuba umzimba ngamnye ubonwe okanye uve omnye. Umzimba wenyama uhlala ufuneka kuba imeko yengqondo isebenza ngokujikeleza. Ngaphandle kweemeko ezikhethekileyo, imeko yengqondo yomntu ayinamandla ngokwaneleyo ukwenza umgama omde kwindawo yengqondo yomnye. Ukuba imeko yengqondo yomntu inxulumene neyenye, ukusondelelana ngokwasemzimbeni akuyomfuneko ukuba achaphazele imeko yengqondo yomnye. Ngokucinga kwakhe, umntu unxibelelanisa imeko yakhe yengqondo kunye nemo yengqondo yomnye. Ngokwemo yengqondo ucinga ukuba unokufakwa okanye ucetyiswe komnye.
Imeko yokomoya yomntu oza egumbini inokuba, kodwa kunqabile, kube kanye, kubonakaliswa yingqondo. Kuyinto engaqhelekanga ukuba imeko yokomoya yendoda yanele ukuba inxibelelane nengqondo kunye nemeko yakhe yengqondo ukuba ibonakale okanye ibonwe yenye. Nangona kunjalo kuyenzeka ukuba imeko yakhe yokomoya, nangona ingadibaniyo nemoya yakhe yokomoya, yomelele ngokwaneleyo ukuba ibangele ubukho bayo babanjwe kwaye babenomoya wemoya yokomoya yomnye, kunye nokuba imeko yokomoya yomnye inokuziswa. ngokunxulumene neminye imozulu yakhe. Xa imeko yokomoya yomntu ibonakaliswa isebenza komnye ngokuzimela kwamandla okuqiqa kunye nemeko yakhe yengqondo, kwaye ivelise ukuzola nokuzola, kwaye ngelo xesha imeko yakhe yokomoya inxulumene kunye nefuthe kwaye inokulawula imeko yakhe yengqondo kunye neengqondo.
Konke oku kunokwenziwa nokuba kusetyenziswe amagama ngaphandle okanye ngaphandle kokusebenzisa amagama, kwaye nangona imeko yokomoya yala madoda mabini ingakhankanywanga. Kwimeko apho amandla okugqibela kunye nokholo kunye nenjongo ziya kuhlala zihlala zichaphazela enye eyaphenjelelwa emva kokuba omnye emkile. Ukuba, nangona kunjalo, umbandela wokomoya kufuneka uthethwe ngawo kwaye lowo umoya wakhe womeleleyo womoya unokuthi uvuse kwaye uvuselele imozulu yomnye ngomxholo wenkolo okanye yindoda yokomoya yodwa, ke lowo uvusiweyo uya kuba nako okufanayo. izilangazelelo njengalowo waphenjelelwa nguye. Kodwa emva kokuba impembelelo isusiwe, kwaye ngokokuqina kokomoya okanye kwengqondo okanye yokomoya yakhe kunye nohlengahlengiso lwento nganye kwezi, uya kusebenza ngokwamandla ayo. Ukuba umoya wakhe uyalawula ngenye indalo yakhe, imibono efakiweyo neyamkelweyo iya koyisa; Ingqondo yakhe iya kuvuma kunye nemeko yakhe yengqondo inokuzanywa nayo. Kodwa ukuba ingqondo yakhe ilawula enye indalo, nangona izimvo zamkelekile, uya kulinganiselwa kwaye alinganiswe kwaye ngobuchule ajongane nengqondo yakhe. Oku kutolikwa komoya wamandla omoya amiselweyo kuya kuvala ngaphandle kwengqondo yakhe ukukhanya kwemeko yokomoya. Kodwa ukuba ingqondo yakhe ayomelelanga ngokwaneleyo kwaye akanakho ngeziphikiso kwaye nengqondo ivale ngaphandle komoya wakhe kwimo yengqondo, ngoko ke imeko yakhe yokomoya iya kuvuselwa kwinkolo yenkolo; iimvakalelo ziya kulawula ingqondo yakhe. Ukukhanya kokomoya okunikelwe kuye kuya kutolikwa ngokweemvakalelo zakhe kwaye uya kuphembelela abanye aze yena alawulwe ziimvakalelo zenkolo kunye nemvakalelo yokuziva.
Ngenxa yantlukwano phakathi kwendawo nganye yezulu yendoda kunzima kumadoda amabini kunye neendawo zazo zemozulu ezahlukeneyo ukudibanisa, ukuvumelana, okanye ukulungelana, ngaphandle kokuba imeko nganye yendawo enye yendoda iyafana ngohlobo enye nenye, nangaphandle kokuba umgangatho kunye namandla emozulu nganye enye ehlengahlengiswa kwimo ehambelana nenye. Ke ulungelelwaniso luhlala lwenziwa phakathi kwamadoda neendawo zazo zeemozulu.
Xa ezimbini zikunye kwigumbi kwaye ulungelelwaniso lwenziwe, indibaniselwano yenziwa phakathi kwemeko yazo yomoya. Ukungena komntu wesithathu kuya kuguqula ngokuqinisekileyo ukudibanisa. Into entsha iya kutshabalalisa ukungathobeki kwaye iphose kwi -armarmony yezulu zimbini, okanye azise into eya kuthi ilungelelanise ngokulinganayo, ixhase, inxibelelanise kwaye izise izivumelwano phakathi kwamadoda kunye ne-atmospheres. Emva kwethuba elidityanisiweyo kwenziwa phakathi kwamadoda amathathu kunye neemoya yawo. Ukungena emva kwendoda yesine neyesihlanu kuya kuvelisa utshintsho kunye nantlukwano kunye nokudityaniswa okutsha phakathi kwezulu njengoko kusaziswa into nganye entsha. Ngendlela efanayo, indibaniselwano yomoya ojikeleze ngokwenziwa ngamanani anikiweyo amadoda iya kutshintshwa kwaye entsha yenziwe njengoko ngamnye ephuma kwigumbi. Isimo salo moya wezulu ngokubanzi kugqitywa ngomgangatho namandla endawo nganye yomoya ngamnye wamadoda.
Ngobukho bendoda enye okanye amadoda amaninzi igumbi nendlu liyinike imeko-bume ebonisa iingcinga kunye neminqweno yabo bahlala okanye abakhe bahlala kuyo. Lo moya ujikeleze kwigumbi okanye indlu ixesha elide emva kokumka kwabahlali njengamandla eengcinga zabo kunye neminqweno emiselweyo; ingavakalelwa okanye ibonwe ngumntu ongena kwigumbi okanye kule ndlu.
Yonke indawo apho abantu bahlanganela khona inemozulu yayo ethile, uhlobo okanye isimilo sayo esimiswe ziingcinga, iminqweno kunye nezenzo zabantu. Iithiyetha, iivenkile zotywala kunye nezibhedlele, iijele, iicawe, amagumbi enkundla nawo onke amaziko oluntu okanye abucala, onke aneempawu zazo zemozulu, ezinokuthi zivakale kubo bonke. Abona bantu bangakhathaliyo kwaye banobuthathaka abanokukhuseleka kwezi meko zemozulu, kodwa baya kuvakalelwa okanye babonwe ngakumbi ngabo banolwazelelelo luchaphazeleka kwaye bavukile.
Ilali, idolophu, isixeko esikhulu, inemeko yaso engafaniyo. Abantu ababonayo okanye ababonayo ubunjani bayo bagcinwa kude okanye besiya kuloo ndawo njengoko i-moya yendawo leyo ivelisa impembelelo yazo kwiimozulu zabantu. Omnye uya kuchukunyiswa ngumahluko phakathi kwendawo yokulwa, ibala lomhlaba, umdyarho webala, indawo yokuhlangana okanye inkampu. Iimpawu zakhe ziveliswa ziimvakalelo zemoya yazo eyahlukileyo eyedwa.
Iindawo ezihlala zidityaniswa ngabantu ayizizo kuphela iindawo ezinesimo semozulu yomoya. Iindawo ekuhlaleni apho inyawo lomntu lingafane inyathele. Umntu oqhele ukutyhutyha amahlathi amakhulu, amathafa abanzi, enqumla kwintlango eyinkqantosi, othe wenyuka waya emigodini, wangena emiqolombeni, okanye wakhangela kwiindawo zokuphumla zomhlaba, uya kwazi ukuba indawo nganye enjalo igcwele kwaye inaye ngeenxa zonke ifuthe lobume obungathandabuzekiyo. Le mpembelelo inokwaziswa kwimo yendoda ukusuka kwimeko yendawo.
Isizwe ngasinye okanye ilizwe ngalinye linemozulu yalo, eyahlukileyo kuleya yezinye izizwe namazwe. UmJamani, umFrentshi, umntu ongumNgesi, uHindoo, uChinaman, okanye umArabhu, wahlukile komnye. Xa umntu wesizwe esithile esiya kwelinye ilizwe uphatha umoya ovela kwilizwe awazalelwa kulo kunye nelokuzalwa kuwo. Ubume bakhe buza kuvalelwa ngabantu besizwe njengahlukileyo kobabo. Lo mahluko uphawulweyo ubangelwa yimo yelizwe lakhe, ethi imbonakalise njengobuntu bakhe obuchaphazeleka kwimeko yakhe yesizwe.
Umoya wesizwe uzibonakalisa ngokwasemoyeni. Lo moya wesizwe okanye umoya ojikeleze umhlaba uyamchukumisa umntwana ongekazalwa, kwaye emva kokuzalwa imeko yelizwe lakhe iyamchukumisa kwaye isebenza ngokwakhe emntwaneni nolutsha kwaye ibonakaliswa kuye njengemikhwa kunye nezithethe kunye nokukhetha, ngokwesikhululo sakhe ebomini kunye nendlela yokuzala. Iintsana ithatha inxaxheba kwaye idityaniswe kwindawo yayo yezulu nganye kwimo yesizwe. Oku kukrola okanye ukudibanisa okanye ukufakelwa kombala kwesizwe kwimeko nganye kubonakaliswa kuye ngokuthi "ukuthanda ilizwe," kwaye kunokubonwa nakwinto ebizwa ngokuba yimikhwa kunye neendlela zesizwe ezinokuthi, kwaye zivame ukwenza, ezichaphazela indlela yakhe yokucinga.
Imozulu yelizwe ichaphazela abo bazalwa kuyo kwaye bahlala kuyo. Ngokwamandla namandla omoya wakhe wokomoya nawengqondo nangokomzimba umntu uya kuchaphazela iimeko zelizwe ahlala kulo. Uya kutsalwa okanye aphononongwe ngommandla welizwe, ngokobudlelwane obukhoyo phakathi komoya wakhe kunye nobume bendawo okanye iinjongo ezibalawulayo.
Ingqondo ihlala incipha kwisizwe esimo sezulu esivumayo kakhulu kowabo. Kodwa kwenzeka rhoqo ukuba ingqondo ifike emzimbeni apho imeko yesizwe yahluke kakhulu kweyayo. Oku kungenxa yeempawu zekarmic, ezinokuba zezemeko enzima. Kodwa oyena mntu wenyama kangaka uya kulishiya ilizwe kwaye akhethe enye eya kuvumeleka ngakumbi kwimeko yakhe elawulayo.
Umntu unokufunda ubuninzi bobume bendalo yakhe nganye ngokujonga ukuba yeyiphi kwaye yeyiphi na indawo yendawo yakhe achaphazeleka ngabantu abathile ahlangana nabo, nendlela ezenza ngayo izinto kunye namazwi kunye nobukho bakhe. Akufanelanga ayenze le nto ngenxa yokufuna ukwazi okanye ngokuthanda ulingelo, kodwa ukuze afunde ukuba angalusebenzisa njani na olululo ehlabathini umsebenzi wakhe ehlabathini. Akufanelanga ukubeka abanye kuvavanyo, okanye ukuzama ukufumana into abanokufihla kuyo. Ukuba uzama ukubachaphazela abanye ngaye nangomoya wemozulu yakhe naziphi na ezo njongo akayi kuqhubela phambili kwizifundo zakhe, kodwa uyakusebenza kwaye edanise imeko yakhe yengqondo kunye nento anokuthi ayizame kubo uya kusabela kwaye amvuselele kwaye amchaphazele Imeko yakhe yengqondo.
Umntu oxhaphakileyo kwiimpembelelo kwaye angakwazi ukuzilawula kufuneka azigcine kude nezihlwele ezikhulu apho uvuyo lubakho khona kwaye kufuneka aphephe izihlokondiba, kuba imeko yehlokondiba igcwele inkanuko kunye nomnqweno, oya kuvusa le mikhosi kwimo yakhe yengqondo Kunokumkhokelela ekubeni enze izinto aya kuzisola ngazo xa elele kakhulu, okanye imeko yelo hlokondiba inokumonzakalisa kuba akavelisi kwaye enze ngokwemigqaliselo ilawulwa lihlokondiba.
Into ekufuneka ifundwe ngommandla wezulu (i-atmospheres) mayibe yindoda ukuba ifumane ulwazi ngesiqu sayo, nokuba azise iimeko zakhe zokomoya ezithandekayo; ukuze awazi umahluko phakathi komncinci nophakamileyo; ukuba aphucule abaphantsi nangaphezulu; nokokuba umntu ngamnye uya kwenziwa agqibeleleyo kwelimiweyo.
Ukuba umntu abe nakho ukuphuculwa kunye nokujikeleza ngakunye kwimeko nganye yomoya kufuneka enze kwaye konke kusebenze kunye ukuze kulunge. Ingqondo efakwe emzimbeni kufuneka iyazi imeko nganye kwaye isebenza kuyo kwaye ikwazi ukuyiqonda kakuhle. Ukwenza oku, isenzo siyimfuneko. Ubume bokwenyama buchatshazelwa sisenzo somzimba, umoya wengqondo onomnqweno, umoya wengqondo ngcinga, kunye nomoya wokomoya ngokholo kwinto eyaziwa ngumntu.
Kwindawo yezulu nganye kufuneka ingeniswe kunxibelelene omnye komnye, kufanele kubekho ukulandelelana okanye isenzo ngaxeshanye. Kufanele ukuba kubekho isenzo esinokuvusa umoya ngamnye wemozulu kwaye siya kutsala ulwazi okanye ukukhanya ngokubhekisele kuko konke. Ukuthetha ngokwasemzimbeni okanye amazwi athethwayo aya kusebenza kwimeko yokomoya, umnqweno uya kuthatha amanyathelo aze asetwa ukusebenza kwimeko yokomoya, ingcinga iya kunika isikhokelo kumnqweno kunye nokubiza ukusebenza kwimo yengqondo, kunye nokholo kulwazi lwazo zonke ziyahambelana Okomoya nakweminye imozulu.
Ukubongoza nokubongoza umntu ukuba abonakale eyedwa kunokwenziwa ngelizwi lakhe, ngokulangazelela ukuyazi, ngokucinga intsingiselo nangokholo olunzulu lobukho bomntu wokomoya obanjiweyo.
Njengomtya odlula kwindawo nganye yezulu kwaye unxibelelana nomntu wenyama, kukho into ehambelana enye nenye kwaye nengqondo ethi ngayo emzimbeni wayo wokwenyama ibe nakho ukuyazi nganye kunye nayo yonke indalo yayo kwaye ilungelelanise nayo ubudlelwane obufanelekileyo kwimeko nganye. Le asiyonto ingaqinisekileyo; yinyani. Ingqondo kumzimba wenyama kukuphela komsipha; umntu ogama lingu "Ndinguye" kwelinye icala. Kwingqondo yomzimba ongabonakaliyo kubonakala ngathi akukho kuphela esinye isiphelo kunoko sikuko; okanye ke, ukuba ucinga ukuba kukho isiphelo sokomoya, ayisiqwalaseli indlela isiphelo esiya kufikelelwa ngayo. Isiphelo esikuwe ngokwasemzimbeni sinokufikelela kwisiphelo sokomoya. Indlela yokufikelela kwaye udibanise iziphelo kukusebenzisa ingcinga. Ukucinga akusiyo indlela, kodwa ingcinga iyenza okanye ilungisa indlela. Indlela yintambo. Ukucinga okuhamba ngale ntambo aze ayifumane aze ayiphonononge. Intambo ngokwayo yile eqondayo kuyo yonke indalo. Ukucinga ngayo sisiqalo; Ukwazi ukuvulwa kwendlela. Ngokuqhubeka ucinga ngayo kwaye ngokwandisa umgaqo-siseko wokwazi, ingqondo engenakuzenzela nto iyaziqhela kwaye izazi ngesiqu sayo esipheleleyo kwelinye imigaqo-nkqubo, kwaye ekuqhubekeni nomzamo oqhubekayo iziphelo ziya kuba yinto enye.